Ama-Proteas women athola i-T20 series whitewash
u-Ayabonga Khaka (3/10) no-Marizanne Kapp (2/8) bakhiphe ama-wicket amahlanu phakathi kwabo njengoba ama-Momentum Proteas enqobe ama-series amabili elandelana njengoba behlule i-Bangladesh ngama-runs angu-23 kumdlalo ohlushwe izulu, wesithathu futhi owokugcina we-T20I we-Cricket South Africa (CSA) Women’s series e-Bloemfontein ngeSonto.
Le-whitewash yokugcina ifika emuva kokuthi iqembu lasekhaya linthole ukunqoba ngo-5-0 wabo wokuqala kwi-ODI series ephele esontweni elidlulile, baphetha i-tour enempumelelo futhi eletha ukuzithemba ngaphambi kohambo olunzima lase-England enyangeni ezayo.
Ishayiswe kuqala i-South Africa futhi yafika ku-64/4 emuva kokuthi ama-overs ancishiswe abekwe kuma-overs ayisishagalolunye iqembu lilinye. Ovula umdlalo u-Tasmin Brits (29) nokapteni u-Dané van Niekerk (12) yibona abafike kwizibalo eziphindiwe njengoba ukapteni we-Bangladesh u-Salma Khatun (2/18), ekhiphe u-Lizelle Lee no-Suné Luus ngo-9 no-5 ngokulandelana kwabo. Umsebenzi ka-Brits kumdlalo wakhe wesibili wamazwe, ikakhulukazi indlela ashaye ngayo kwaze kwaba i-over yesishagalombili ngaphambi kokuthi akhishwe u-Rumana Ahmed (1/13).
Izivakashi aziqalanga kahle ngokushaya ngoba iphose kahle i-South Africa. i-Player of the Series, u-Shabnim Ismail (0/5 kuma-overs amabili) uqale nge-maiden over, okuvulele u-Marizanne Kapp izigcaba zokukhipha i-wicket yokuqala (u-Murshida Khatun, 1) kwi-over yakhe yokuqala.
Inkinga ayigcinanga lapho, u-Ayabonga Khaka uhlasele kwi-over elandelile, wakhipha u-Fargana Hoque enama-runs amabili. u-Raisibe Ntozakhe (1/10) naye ukhiphe umuntu njengoba ekhiphe u-Rumana Ahmed enama-runs ayisithupha, okushiye izivakashi enkingeni ku-20/3 nge-over yesihlanu. u-Khaka uhlasele kabili nge-over yesithupha, wakhipha u-Shamina Sultana no-Niger Sultana ngama-runs angu-12 no-3 ngokulandelana kwabo, ngaphambi kokuthi u-Kapp akhiphe i-wicket yokugcina (u-Jahanara Alam, 3) nokusiza i-South Africa inqobe.
Iqembu lizoya e-England ngo-June 3 bezobhekana neqembu lasekhaya kwi-ODI series yemidlalo emithathu ne-T20I triangular series ezofaka ne-New Zealand.
u-Luus no-Van Niekerk bahlela ukunqoba i-series kwama-Proteas women Ama-Proteas women aphetha ngokuthola u-5-0 Ama-Proteas Women anqoba emine kwemine Ama-Proteas azimisele ukunqoba i-ODI series e-Kimberley Ama-Proteas women anqobe umdlalo wokuqala bedlala ne-Bangladesh u-Salieg Nackerdien ubekwe njengomqeqeshi obambile wama-Momentum Proteas Ama-Proteas women akulungele ukuhlangana ne-Bangladesh i-Cricket South Africa imemezele amaqembu ama-Proteas women azodlala ne-Bangladesh CSA announces Momentum Proteas contracted squad list Ama-Proteas esifazane afuna ukuqeda ngamandla Imvula inqoba umdlalo wesine we-Women’s T20 e-Centurion